Ukumaketha Kubasebenzisi Be-Smartwatch: Ucwaningo Odinga Ukukwazi | Martech Zone
Ukumaketha Kubasebenzisi be-Smartwatch: Ucwaningo Oludinga Ukwazi
NgoLwesithathu, Februwari 3, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ngaphambi kokufunda lokhu okuthunyelwe, kufanele wazi izinto ezimbili ngami. Ngiyawathanda amawashi futhi ngingumlandeli we-Apple. Ngeshwa, ukunambitheka kwami ​​kumawashi akuhambisani neze namanani entengo emisebenzini yobuciko engingathanda ukuba nayo esihlakaleni sami - ngakho-ke i-Apple Watch bekufanele. Ngicabanga ukuthi akumina ngedwa ocabanga kanjalo, noma kunjalo. Ngokusho kweNetBase, i- I-Apple Watch ishaye uRolex ekukhulumeni komphakathi.
Bengingenathemba elikhulu lokuthi i-Apple Watch izoguqula umsebenzi wami noma impilo yami uqobo, kepha ngihlabeke umxhwele ngomthelela ekube nawo. Ngenkathi iningi labangane bami liphethwe ama-smartphones abo, ngivame ukushiya ifoni yami eduze bese ngiyikhohlwa usuku lonke. Ngihlunge kuphela izinhlelo zokusebenza engifisa ukwaziswa ngazo ngokubuka. Ngenxa yalokhu, angifinyeleli ifoni yami futhi ngilahleka odakeni lwezaziso zohlelo lokusebenza zehora elilandelayo. Lokho nje kukodwa kwenze kwaba wusizo olukhulu ekukhiqizeni kwami ​​umkhiqizo.
Ucwaningo lweKentico's Smartwatch yingxenye yeshumi yochungechunge lwayo oluqhubekayo lweCentico Digital Experience Research. Ngaphandle kokuthengisa okuswelekile, cishe ama-10% wabaphenduli bangathanda ukuthi ekugcineni babe ne-smartwatch; kanti ama-60% ahlela ukukwenza kungakapheli unyaka olandelayo.
Landa ucwaningo lweKentico's Smartwatch
Ama-Smartwatches amele ithuba eliyingqayizivele lokuthi angakwazi ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni. Ngakho-ke ngenkathi abenzi bedivayisi belwela ukudala amacala okuphoqelela ukusetshenziswa kwe-smartwatch, ama-brand nabathengisi kufanele futhi babheke iso elibukhali.
Ingxenye eyodwa kwezintathu zabaphendulile ithande umbono wokuthola izinkomba-ndlela, ukulandela umkhondo wokudla nokuqina, ukuseshwa okwenziwe ngezwi, kanye nezixwayiso zesikhathi sangempela ezivela enkampanini yezindiza, ebhange noma kunethiwekhi yokuxhumana nabantu nge-smartwatch. Ukuhlanganiswa kwe-Apple Maps neWatch kuhle impela… nakhu sethemba ukuthi ikhwalithi yamamephu iyaqhubeka ithuthuka!
Abasebenzisi abengeziwe be-Smartwatch:
Ama-71% wabathengi azolunga ngokukhangisa okukhethiwe okulethwe ku-smartwatch
Abathengi abangama-70% bakholelwa ukuthi bazosebenzisa i-smartwatch ukuzisebenzisela bona kuphela
Iningi labaphendulile lithe bajabule kakhulu ngomqondo wokuthola ama-imeyili nemibhalo ku-smartwatch sabo.
Nayi i-infographic enhle ediliza eminye yemiphumela:
I-Kentico iyi-CMS yonke, i-E-commerce, neplatifomu Yokumaketha eku-inthanethi eqhuba imiphumela yebhizinisi yezinkampani zabo bonke osayizi abasesimweni noma efwini. Inika amakhasimende nabalingani amathuluzi anamandla, aphelele nezixazululo zamakhasimende ukudala amawebhusayithi amahle futhi aphathe okwenzeka kumakhasimende kalula endaweni yebhizinisi enamandla. Ukukhethwa okunothile kweKentico Web Content Management Solution yezingxenye zewebhu ezingaphandle kwebhokisi, ukwenza ngezifiso okulula, nokuvulwa API ngokushesha kwenza amawebhusayithi asebenze. Uma ihlanganiswe nesethi ephelele yezixazululo ezihlanganisiwe, kufaka phakathi ukumaketha oku-inthanethi, ezokuhweba nge-inthanethi, imiphakathi eku-inthanethi, ne-Intranet nokusebenzisana, iKentico ilungiselela ngokuphelele ulwazi lwamakhasimende edijithali kuziteshi eziningi.
Tags: i-apple watchkenticoukubukwa kwe-samsungSmartWatchukwamukelwa kwe-smartwatchukubukela
Ungaguqula kanjani Amanani Wokuzibandakanya Kwe-imeyili Okwehlayo